Tireoplastika kungase kudingeke ukuba abantu abane-apula i-Adamu lithola usayizi esikhulu, kanye ezimweni lapho umuntu - transsexual. Ngemva umphumela inqubo eyinkimbinkimbi ngokushesha zile. apula sika-Adamu protrusion esenyamalala, isibanda, awasalayo emva kokuhlinzwa, cishe awekho lubonakale. Njengoba kuvumelana pleats entanyeni. Ngemva ukususwa apula Adamu sika siyashintsha izwi. Iphimbo iba ezithambile futhi njengabesifazane. Lokhu kwenziwa ngokusebenzisa ukuhlinzwa endoscopic, okuyinto thins futhi sifushanise yezwi. Ukususwa kwezimiso apula Adamu sika - Lena inqubo eyinkimbinkimbi elidinga ukunakekelwa okukhethekile. Ngakho-ke kubalulekile ukusebenzisa ezikhethekile kuphela emitholampilo ENT, okuyinto ifakwe imishini ekhethekile eyenza ithole ukuxilongwa okufanele kanye olunembile.
Kushiwo ngamuphi umqondo ukuthi ukuhlinzwa ukhishwe apula Adamu sika?
Ukwehla apula Adamu sika, kanye nokususwa okuphelele apula Adamu sika uyayixazulula inkinga zabantu abaningi. Lapho apula sika-Adamu inqanyulwa, okungukuthi, ngaphambili ingxenye uqwanga yegilo, ngesikhathi emphinjeni iba ukubukeka isifazane. Ngaphambi kokuqala ukusebenza, kubalulekile ukwenza i x-ray of the uqwanga yegilo kanye yephimbo, kanye ovivinyweni olubangelwa sokucindezeleka, ubuze udokotela ENT. Lokhu kwenziwa ukuze balinganise amabanga ngqo kusuka phezulu apula Adamu ukuba yezwi. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukususa esiphezulu izicubu apula sika-Adamu, ngesikhathi esifanayo, ngaphandle kokulimaza yezwi. Ukuhlinzwa ukususa apula Adamu sika wenziwa ngaphansi izinzwa jikelele. Imbobo kule ezahlukene 2-4 amasentimitha endaweni yesithathu phakathi uqwanga yegilo, kuhlanganise skinfold. Khona-ke bembula uqwanga yegilo kuze perichondrium. Lokhu kumele kwenziwe ukuze ilimaze ingxenye engaphakathi. Emaphethelweni elingaphandle apula Adamu wasusa kuya esiphezulu kule uhla oyifunayo. Imisipha amalaka, okuyinto bangaphandle ngobunono ithungwe ngaphezu kwamanzi, lapho ukusebenza wenziwa. Ngemva lokhu okwenziwa umphetho yezimonyo futhi ngebhandeshi aseptic sisetshenziswa.
Isikhathi nokuvuselelwa emva ukususwa apula Adamu sika
ubuhlungu Yethula endaweni lapho ukungenelela kuhlinzwa Kwakuseshwa, ngesikhathi ngemuva kokuhlinzwa ngezinsuku zokuqala. Njengoba kahle isiguli ngobuthakathaka hoarseness kwezwi. Konke lokhu kuyokwenzeka ngokwaso inqubo yokwelapha. Udokotela kunesithembiso sigqoka izinguquko nsuku zonke. Kuyasiza ukuba aphulukise ngokushesha ngangokunokwenzeka isilonda post-kuhlinzwa. Ngemva ukwehla ukuvuvukala emva ukususwa apula Adamu, kumelwe ususe yaseZimbabwe. ngokuvamile Lokhu kwenzeka ngosuku lwesishiyagalombili noma okweshumi ngemuva kokuhlinzwa.
Izimo ukuhlinzwa ukususa apula Adamu sika
Lolu hlobo ukuhlinzwa ngeke akwazi ukwenza konke. Kukhona Izimo ezithile. Uma isiguli ukuvuvukala, kanye nezifo ezingamahlala khona elihlobene ne-umphimbo, ukwenza ukuhlinzwa okunjalo akuvunyelwe nakancane. Izimo ukuhlinzwa Ungaqhubeka ukhonza futhi izici ezifana ukuvaleka amalaka. Uma kukhona izifo ezihlobene esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, nokugula ngengqondo, kubuye kube ukulahlwa okuphelele nokususwa apula le-Adamu. ukusebenza Kunalokho eziyinkimbinkimbi okudinga ukunakekela ngaphezulu kufanele ubanjwe ngaphansi kuhlolwa ENT odokotela. Ukuze kahle futhi ngendlela efanele bafeze lo ukuhlinzwa, kubalulekile ukuba sisebenzise kuphela emitholampilo ezikhethekile, okuyinto babe imishini yesimanje. Lokhu kuhlanganisa laser futhi amagagasi ubuchwepheshe, nangezibonakhulu optical nokuningi. abelaphi emsebenzini, kanye izinzwa abakhethiwe kahle - kungcono yisibambiso abanekhono futhi asuse kahle apula le-Adamu.
Uyoba ingane, kungani futhi kanjani ukudlula ukuhlaziywa isidoda?
Breathing izivivinyo: yokuzivocavoca. ukuphefumula amasu
NJENGOBA inkondlo "Ngokuhlukana" Pushkin sika: usebenza ukuhlaziywa